Sida loo Download Samsung AllShare Play (link) iyo Connect in PC
Samsung AllShare mar walba wadnaha uu ku dhiirigelinayaan in uu qaadan karo kibir jirtay. Hadda ka hor loo yaqaan Samsung Link, App ayaa waxaa dagan AllShare. Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha oo dhan waa; app AllShare yimaado la muuqaalada cajiib ah in uu yahay oo dhan set for isticmaalka a socon. Waxaa la sameeyey hoos hanuun iyo bandiiradihii Samsung Electronics Co., Ltd. Iyadoo horumarinta ee horumarka, app AllShare hadda waa adeeg la wadaago oo degdeg ah warbaahinta DLNA sameeyo Samsung.
1. Waa maxay sababta AllShare ayaa lagu bedelay Samsung link?
Horumarinta Samsung ayaa had iyo jeer isku dayeen in ay gargaar ah oo loogu talagalay dadka ka dhigi. Horumarinta ee Samsung Link la lagu wadaa in la baxshay sidii Samsung AllShare. Tani ma ahan oo kaliya sababtoo ah magaca, laakiin waxaa ay ahayd horumarinta ah qayb haynta, iyo wadaaga ah. The app AllShare loo sameeyay sidan oo kale in mid ka mid ah sidoo kale waxa ay la wadaagi karaan mid ka mid ah qalabka kale ee karin files dukaanka oo keliya, laakiin. Inta badan xiiso leh, taas app cajiib ah oo aan u baahnayn xidhiidh kasta oo internet oo kale si xubnuhu qalabka. Sidaas darteed, app ayaa waxaa dagan AllShare ma aha oo kaliya magaca laakiin sidoo kale muuqaalada cajiib ah u leeyahay.
Degsado Samsung link ayaa hadda fudud oo la heli karo, Hubaal. Waxa soo baxa in uu noqdo ciyaaryahanka ugu fiican markii mid helitaanka Samsung ah ahbaa telefoonka gacanta ama qalab kale oo wax. The link Samsung ayaa diyaar u ah download bilaash ah. Waxa aanu si gaar ah uma baahna oogin soo bixi faylka. Si kastaba ha ahaatee, waxa lagala soo bixi karaa si degdeg ah oo lacag la'aan ah. Mid ka mid ah xitaa isku dayin kartaa link http://samsung-allshare.en.lo4d.com/ . Si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan tahay rakibo dheeraad ah ka dib markii file ayaa si guul leh u soo bixi la.
3. Samsung AllShare qalabka socon
Ku darista wows dhammaan sifooyinka cajiib ah, taasi app gaar ah waa inay la jaan qaada inta badan Samsung ah ee qalabka. Waagii hore markii app la bilaabay marka hore, waxaa lagu soo bandhigay in qaar ka mid ah lagu daydo ah. Si kastaba ha ahaatee, madaama markii ugu koray, Samsung u suurtagashay in ay balaariso oo dhan ay hindiseen iyaga oo gargaar ka app this. Taasi waxay u socon waayo, dhammaan barnaamijyadooda kale in lagu taageero AllShare Samsung ah mid ka mid ah inclusions ugu weyn sida qalabka helay. Liisaskaa ee inclusions waa:
• Samsung Smart TV'yada
• Ogow Galaxy 10.1
• Ogow Galaxy II
• Qaar kale
4. Sidee in ay ku xidhmaan PC iyo qulquli videos ka Samsung in PC
Step1: First rakibi app AllShare in labada ay hindiseen. Tani waxay kaa caawin doontaa in qalabka oo dhan si ay u xiriiriso kasta oo kale. Kaqabto, waxay oggolaan doontaa in files qaybsiga fudud u dhexeeya mid ka mid qalab kale. Ka dib markii Mudanayaasha gebi ahaanba waa dhameystiran, waxaad isticmaali kartaa app ee qalabka kala duwan.
Talaabada 2: Ka helay in Settings ka dibna qalabka dhow ka labada dhinac si ay u awood. Tani waa muhiim maxaa yeelay waxa ay u ogolaan doonaan qalab si aad u ogaato qalabka dhaw app.
Talaabada 3: Labada qalabka ka darfaheeda noqon lahaa arki karo. Hadda uun ka arki kartaa sida loo helo doorasho ee xirmaan inta u dhaxaysa ay hindiseen!
Talaabada 4: Isku labada hindiseen. Waxa uu u suurtogelin doonaa si ay u gudbiyaan files ka mid qayb ka mid in kale. Marka ay labada qalabka ay ku xidhan yihiin, waxaad u baahan tahay in ay ku shaqeeyaan hal qalab oo ka fiiriyaana ee files oo loo baahan yahay in lagu wareejiyo.
Talaabada 5: Dooro liiska faylasha loo baahan yahay in ay yihiin in la wadaago ka qalab Samsung ah.
Talaabada 6: Riix soo dir. Waxaad arki doontaa in faylasha lagu dhaqaaqay qalab kale oo app la shaqeeya kaliya dhammaataan.
Tallaabo 7: aad file hadda wareejiyo.
5. Space ku koobnayn ee Samsung AllShare
Ku daray in qaar ka mid ah sababaha ka walwal ah, waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo uu ka walwalo ka baxeen. Iyadoo faa'idooyinka ku xirnayn, hal shey oo hoos u jirsado filayo jiro. Marka laga reebo oo dhan faa'iidooyin kale, AllShare Samsung waxa uu leeyahay awood aad u yar oo xadidan kaydinta. Tani kacay arimo dhowr ah si aad u hesho ka walaacsan leh.
Si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo tan, weli wax badan oo faylasha lagu kaydin karaa iyadoo la kaashanayo app AllShare ah. Taas ayaa ka dhigaysa caawinaad dhab ah dhammaan dadka isticmaala si ay u isticmaalaan App AllShare ah. App waxaa si kastaba ha ahaatee ahbaa la horumarinta badan. Dhab ahaantii, iyadoo la kaashanayo app this, aad wareejin karaan faylasha hal mar. Tani waxay kor u siinayaa caawinaad dhab ah.
TunesGo waa mid ka mid ah qoraalkii ugu casriyeeyo wadaago barnaamijyadooda ka qalab aad. Waxaad had iyo jeer ka soo rogan kartaa wadaagaan files ka mid qalab kale oo la kaashanaya of TunsenGo. Waxa ay u ogolaataa degsado iyo files leh noocyo kala duwan oo badan oo la wadaago.
Wondershare TunesGo waa sida app ah ka dhigaya ilaa ay taageerto kor u qalab aad sidoo kale la wadaago files soo dumaya. Keydso markii ay kor u taageerto iyo files ka mid qalab u gudbaayo kale isticmaalaya TunesGo Wondershare. TunesGo ayaa diyaar u ah dadka isticmaala qalabka oo dhan iyo waa ay fududahay in laga heli. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa oo muusiko dhegayso ka TunsenGo.
> Resource > Windows > Sida loo soo bixi Samsung AllShare Play (link) oo ku xidhmaan PC